မလေးရှားမှာ မြန်မာတစ်ဦး ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ထောင် ၁၀ နှစ်ကျ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မလေးရှားမှာ မြန်မာတစ်ဦး ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ထောင် ၁၀ နှစ်ကျ
To go with "Malaysia-crime-drugs-race-social,FEATURE by M. Jegathesan This picture taken on September 19, 2013 shows Malaysian special policemen standing duringapress conference called "Op Cantas Khas" outsideashopping mall in downtown Kuala Lumpur. Jobless at 16, and facing the economic marginalisation of many Malaysian Indians, Raju opted for the danger and easy money of life in the notorious "04" criminal gang. AFP PHOTO / MOHD RASFAN
မလေးရှားမှာ မြန်မာတစ်ဦး ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ထောင် ၁၀ နှစ်ကျ
အလုပ်လက်မဲ့တစ်ဦးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်နာကျင်စေမှုနဲ့ စားသောက်ဆိုင်အကူ မြန်မာလုပ်သားတစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်နဲ့ ကြိမ်ဒဏ် ၂ ချက် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ကပ်ဟောင်ထောင်ကို ပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက် တရားသူကြီး ဒါတင် ခွန်နာဆွန်ဒရီက မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့မှာ ထောင်ဒဏ်နဲ့ ကြိမ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ အဖမ်းခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဟာ ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်မှုမှာ အပြစ်လွတ်အောင် ထွက်ဆိုနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်သူက မူဟာမက် နာဂျပ်ဘူဒင် နက်ဇဒင် (၁၉ နှစ်) ဖြစ်ပြီး အုတ်ခဲကို အသုံးပြု တိုက်ခိုက်လို့ လက်ကောက်ဝတ်မှာ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း မလေးရှားက လာတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မလေးရှားမှာ မွနျမာတဈဦး ရိုကျနှကျမှုကွောငျ့ ထောငျ ၁၀ နှဈကြ
အလုပျလကျမဲ့တဈဦးကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ထိခိုကျနာကငျြစမှေုနဲ့ စားသောကျဆိုငျအကူ မွနျမာလုပျသားတဈဦးကို ထောငျဒဏျ ၁၀ နှဈနဲ့ ကွိမျဒဏျ ၂ ခကျြ ပွဈဒဏျ ခမြှတျလိုကျပါတယျ။
အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ ကပျဟောငျထောငျကို ပွဈမှုထငျရှားတဲ့အတှကျ တရားသူကွီး ဒါတငျ ခှနျနာဆှနျဒရီက မနကေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂ ရကျနမှေ့ာ ထောငျဒဏျနဲ့ ကွိမျဒဏျ ခမြှတျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
မနှဈက မတျလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ အဖမျးခံရတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားဟာ ထိခိုကျနာကငျြအောငျ လုပျမှုမှာ အပွဈလှတျအောငျ ထှကျဆိုနိုငျခွငျး မရှိကွောငျး၊ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ထိခိုကျသူက မူဟာမကျ နာဂပျြဘူဒငျ နကျဇဒငျ (၁၉ နှဈ) ဖွဈပွီး အုတျခဲကို အသုံးပွု တိုကျခိုကျလို့ လကျကောကျဝတျမှာ ဒဏျရာရခဲ့ကွောငျး မလေးရှားက လာတဲ့ သတငျးတှမှော ဖျောပွထားပါတယျ။
Previous articleနယ်လိုင်စင်နဲ့ အပ်တဲ့ ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်းတွေကို ရန်ကုန်လိုင်စင် ထုတ်မပေးတော့
Next articleAP သတင်းဌာနက ဖော်ပြသလို ရုပ်အလောင်းတွေ မြှုပ်နှံထားခြင်း မရှိကြောင်း အစိုးရ ထုတ်ပြန်